आइपीएलमा दिल्ली र पञ्जाब भिड्दै, सन्दीप आज खेल्छन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलमा दिल्ली र पञ्जाब भिड्दै, सन्दीप आज खेल्छन् ?
काठमाडौं, वैशाख ८ । इन्डियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) को ११ औं संस्करण यति बेला भारतमा जारी छ । स्थानीय समय अनुसार आज राति ८ बजे घरेलु मैदानमा रोयल च्यालेन्जरस् बैग्लोरे दिल्ली डेयरडेभिल्स्सँग भिड्दै छ ।
दिल्लीमा नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आवद्ध छन तर यसअघिका चार खेलमा उनले खेल्ने मौका नै पाएनन् । आजको पञ्जाव विरुद्धको खेलमा पनि सन्दीप खेल्ने संभावना न्यून रहको बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः वार्नरको शानदार कम ब्याक, कोलकाताविरुद्ध अर्धशतक
११ औं संस्करणको आइपीएलमा दुबै टोलीले समान चार खेल खेलका छन् । दुबैले एक जित र तीन हार व्योहोरेका छन् । यसअघि झै आज पनि सन्दीपको नाम प्लेइङ ११ मा पर्ने सम्भावना कम रहेको जनाकारहरु बताउँछन् ।
बैग्लोरको एम चिन्नास्वामी रंगशाला यी दुई चिरपरिचित दुई टोली भिड्दै छन् । यसअघि भएका १९ खेलमध्ये पञ्जावले ११ मा जित निकालेको छ भने दिल्ली ६ मा । एकमा बराबरीमा र एक खेल रद्द भएको इतिहास छ ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः हैदरावादविरुद्ध क्विन्टनको अर्धशतक पूरा
आएपीएलका नियम अनुसार एउटा खेलमा एउटा टिमले चार जनासम्म विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउँछ । सन्दीप संभावना धेरै भएका उदयमान खेलाडी हुन तर दिल्लीमा उनी सबै भन्दा सस्ता र कान्छा खेलाडी पनि हुन ।
त्यसैले आजसम्मको दिल्लीका व्यवस्थापनको निर्णय हेर्दा महंगा र लामो अनुभव भएका खेलाडीलाई बेन्चमा राखेर सन्दीपलाई खेलाउने आँट गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस दिल्लीले मुम्बईलाई दियो जितका लागि १७५ रनको लक्ष्य
शुरुवाती खेल हारेर दिल्ली यो संस्करणमा बढी दवावमा देखिएको छ । दिल्लीका पहिलो पटक कप्तानी सम्मालेका गौतम गमभीर याे सिजनमा जम्न सकेका छैन । त्यसैले पनि नयाँ र युवा खेलाडी खेलाउने हिम्मत दिल्ली सँग देखिएको छैन ।
ट्याग्स: Dilli, IPL